Daruur hubaal la’aan ah oo dul hoganaysa qabsoomidda doorashada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya | Baydhabo Online
Daruur hubaal la’aan ah oo dul hoganaysa qabsoomidda doorashada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya
Iyadoo wakhtiga loo qorsheeyay iney dhacdo doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ka harsan yihiin 11 maalmood oo qura ayaa waxaa cirka isku shareeray xiisado hareeyay suurtagalnimada iney doorashada qabsoonto xilligii loogu tala galay.
Cabsida ugu weyn ee arrintan laga qabo ayaa ah iney qabsoomi weydo doorashada oo loo asteeyay 17-ka bishan Nofeembar, oo markii maanta laga reebo ay ka hareen 10 cisho oo kaliya.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya “ayaa fartay madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed iney doorashada maamulkaasi dhacdo xilligii loo asteeyay oo ah 17-ka bishan Nofeembar” ayaa lagu yiri hadal kasoo baxay wasaaradda.
Jawaabta golaha maamul goboleedyada ay ka bixiyeen is casilaadda guddiga
War saxaafadeed ay hoggaanka golaha maamul goboleedyada ka soo saareen xiisaddan ayay uga hadleen dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen;
– Iney si buuxda u taageereen tallaabada is casilaadda madaxda iyo xubnaha guddiga doorashada, ayagoo dhinaca kalena sheegay in “faragelin lagu hayo doorashada”.
– Iyo inay dowladda feredaalka ku eedeeyeen iney “faragalin qaawan ku heyso siyaasadda iyo howlaha doorashada ee la xiriira maamul goboleedka Koonfur Galbeed”.
Horay ayay afarta maamul goboleed ee kala ah Koonfur Galbeed, Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ugu heshiiyeen inay xiriirka u jaraan dowladda federaalka, waxayna wali ku adkeysanayaan mowqifkooda.
Doorashada dib ma u dhici kartaa?
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa aragti ahaan qaba in burburka guddiga doorashada uu saameyn ballaaran ku yeelan karo qabsoomidda doorashada, ayna macquul tahay in uu hakad galiyo qabanqaabada doorashada.
Qaarkood waxay sheegeen in xitaa arrintan ay horseedi karto dib u dhac doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ku yimaada muddo dhowr bilood oo dambe ah, maadaama ugu horreyn loo baahan yahay in la dhiso guddi hormuud ka noqda howlaha doorashada.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi, oo ah agaasimaha machadka cilmi baarista ee Heritage ayaa BBC-da uga warramay waxa ay is casilaadda guddiga doorashada Koonfur Galbeed ka dhigan tahay.
“Meeshaas waxaa laga sugayay doorasho, waxaana la rabay iney noqoto mid si sharaf leh u dhacda oo shacabka galisa yididiilo, laakiin waxaa ka jira is-dhex-yaac badan, taasina waa mid dhibaato ku ah shacabka. Soomaaliya waxaa ku badan siyaasiyiinta isbarbar yaaceysa, wuxuuna dalku u baahan yahay hoggaamiyeyaal u gurmada shacabka ay marna abaaruhu dhammeynayaan marna muranka siyaasadeed dhexda uga jira” ayuu yiri Cabdirashiid.
Agaasimaha Heritage ayaa sidoo kale sheegay iney waxyaabo badan ka khaldan yihiin habsami u socodka doorashada; “Hannaanka wax ku socdaan oo dhan ma qurux badna. Waa doorasho la isbaacsanayo oo lacago la isku wada eedeynayo. Qaarkood waxaa lagu eedeynayaa iney dowladda dhexe lacago ka soo qaateen. Marka waxaasoo idil waxay nuxurka ka dilayaan doorashada, waxayna sharafta ka qaadeysaa dadkii laga rabay iney soo doortaan hoggaamiyeyaal u daneeya shacabka”.
Dowladda dhexe ma muquunin kartaa doorashada Koonfur Galbeed?